Yedu Brands - Xuzhou Bonovo Machinery & Equipment
Xuzhou Bonovo Machinery & Midziyo iri muXuzhou guta, hombe & yekutanga kuvaka michina yekugadzira base yeChina, uko akawanda epasirese mazita emhando dzakadai seCaterpillar, Volvo, John Deere, Hyundai neXCMG vakaisa mari uye vakavaka mafekitori avo zvirimwa pano.
Iine hunyanzvi hwekugadzira tekinoroji uye zviwanikwa zvesosi mumasumbu emabhizimusi, Bonovo yakagadzira matatu makuru emabhizimusi (Bonovo Attachments, Bonovo Undercarriage Zvikamu uye DigDog) uye Bonovo timu inogara ichikwanisa kukupa iwe ese ese mhando mhando yemuchina zvigadzirwa zvisinei iwe uri varidzi varidzi, vatengesi kana vashandisi-vekupedzisira.
Bonovo Attachments yakatsaurirwa kubatsira vatengi kuwana kuita kwakawanda uye kugadzirwa kuburikidza nekupa zvakanakisa zvakasungirirwa zvemhando kubva 1998s. Iyo mhando inozivikanwa nekugadzira mhando dzemhando yepamusoro mabhaketi, anokurumidza couplers, grapples, ruoko & booms, pulverizers, rippers, zvigunwe, rakes, mabreaker uye macomputer emhando dzese dzezvicherwa, skid steer loader, mavhiri anotakura uye mabhurldozers.
Bonovo Undercarriage Zvikamu zvakapa zvakasiyana siyana zvepasi pekupfeka zvipfeko zvezvinhu zvekuchera uye dozers. Isu tinonzwisisa musanganiswa wakakwana wemhando yepamusoro simbi yakakoswa uye tekinoroji yepamusoro yekurapa kupisa ndizvo zvinhu zvakakosha shure kwekubudirira kweBONOVO brand. Zvikamu zvedu zvepasi pemota zvakavakwa nehunhu hwakanaka, kuvimbika uye yakareba garandi iwe yaunogona kuvimba zvizere nayo. 70,000sqf imba yekuchengetera inogona kugara ichizadzisa yako yekukurumidza kuendesa, uye yakasimba R&D pamwe neakawanda nyanzvi nyanzvi yekutengesa timu inogona kugutsa chero chako chako hwekugadzirisa zvinodiwa nekukurumidza.
DigDog rudzi rutsva rwemhuri rweboka reBonovo kubvira 2018. Nyaya yaro yechiratidzo yakadzokera kuma1980 apo yaishandiswa seyakakurumbira bhaketi bhegi muSouth Africa. Bonovo akagara nhaka iyi inofadza brand, kodzero dzayo dzerejista uye domeini zviri pamutemo makore matatu mushure mekudonha kwayo. Mushure memakore akati wandei kushanda nesimba uye indasitiri ruzivo rwekuunganidza, DigDog rave kuve rinoremekedzwa mhando kune mini vacheri uye skid steer vatambi. Isu tese tinotenda kuti "Imbwa inonyanya kugona pakuchera kupfuura kati". Chinangwa chedu ndechekuita DigDog inozivikanwa inozivikanwa yevanochera zvidiki vanoshanda nemazvo muyadhi yako uye sirogani yedu ndeyekuti: "DigDog, wako akavimbika digger!"